“Raharaha 10 aogositra” : tsaroana fa tsy fantatra ny marina 25 taona aty aoriana | NewsMada
“Raharaha 10 aogositra” : tsaroana fa tsy fantatra ny marina 25 taona aty aoriana
25 taona ny “Raharaha 10 aogositra”. Hatramin’izao, tsy fantatra ny marina. Tsy misy fikarohana. Vitavita ho azy?
25 taona ny “Raharaha 10 aogositra“, taona 1991: ny “Diaben’ny Fahafahana” nataon’ny Hery Velona Rasalama (HVR) notarihin-dry Pr Zafy Albert, ny pasitera Andriamanjato Richard, ny Jly Rakotoarisoa Jean. Niainga teny amin’ny Kianjan’ny 13 mey ny vahoaka ho eny amin’ny lapan’Iavoloha.
Anton’ny diabe ny hoe hifampidinika amin’ny filoha Ratsiraka hametra-pialana sy hiroso amin’ny fanovana lalàmpanorenana ny solontenan’ny HVR. Tsy nahomby ny fitokonambe nitakiana izany, nanomboka ny 1 mey, na nikatso aza ny fitantanan-draharaham-panjakana ankapobeny.
Nisy ny antoko politika tsy niara-dia tamin’ny HVR nilaza fa fitondrana ny vahoaka hovonoina ny hetsika. Faritra saropady ny lapam-panjakana, hahitan-doza raha “hanihana“. Teo koa ny fiheverana fa hahamora ny fanalana na ny fialan’ny mpitondra ny fisian’ny ra mandriaka.
Efa paikady voaomana mialoha ny zava-nitranga
Niseho àry ny toraka pilotry ny Antandroy, 1,5 km alohan’ny sampanan-dalana ho any amin’ny Lapan’Iavoloha. Tamin’izany, nisaritaka ny olona. Nisy nitsoaka teny an-tanimbary manodidina: nipoahan’ny fanja nilevina.
Nidridridridry nisidina teo ambonin’ny lohan’ny rehetra koa ny helikoptera. Noheverin’ny maro fa nitsoaka tamin’izany ny filoha Ratsiraka. Kinanjo, nisy ny fandatsahana grenady narahina tifitra avy amin’izany.
Efa paikady voaomana mialoha? I “Masoandro” no hoe nanome baiko. Tao anatin’izany ny fikendrena manokana ny fiara miloko mainty nisy ny Pr Zafy Albert. Nisy ny fibaikoana ny miaramila hitifitra ny tongotry ny mpanao diabe.
Nisy àry ny maty, naratra, tsy hita popoka… Firy marina? Resabe tamin’io andro io ny fanasana ny arabe nihosin-dra, ny fisian’ny lavaka nanaovana fandevenana faobe, ny fanaovana savahao ny tanàna manodidina ny alin’ny 10 aogositra…
Tsy hita na tsy fantatra ny marina
Amin’izay lazaina ho hetsi-bahoaka, tarihin’ny mpanao politika toy ireny: mitondra faisana sy takaitra hatrany ny vahoaka, matimaty foana. Atao fitaovana politika hakana fanjakana? Hatramin’izao, tsy hita izay fiovana sy fihatsaran’ny fiainam-bahoaka.
25 taona aty aoriana, tsy fantatra ny tena marina: tsy karohina; izay mahalala, tsy milaza. Vitavita ho azy? Mila karohina sy havoaka ny marina amin’ny maha tantaram-pirenena ny “Raharaha 10 aogositra“. Iza, ohatra, no tena tomponandraikitra, firy marina ny maty… ?